राम्रो सुरुवात- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
देश समृद्ध हुन नसकेको मुख्य कारण विरोधका लागि विरोध गर्ने हाम्रो संस्कार नै हो । विरोधीका पनि सही कुरालाई आत्मसात गर्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरबाट सुचारु गर्नुभएको टेलिप्रेजेन्स बैठकको धेरै विरोध भयो । विश्व अहिले सूचना प्रविधिको युगमा छ । एकातिर सूचना प्रविधिको प्रयोग नै भएन भनेर विरोध गर्छौं, अर्कोतिर सरकारले यसको प्रयोग गर्न लागेकोमा विरोध गर्छौं । प्रधानमन्त्रीले टेलिप्रेजेन्समार्फत सिंगापुरबाट गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद बैठक एउटा राम्रो सुरुवात हो । यसलाई स्वागत गरौं । दुर्घटना हुनसक्छ भनेर के बसमा यात्रा नै नगर्ने त ? दुर्घटना हुन नदिन के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसमा बहस गरौं । प्रधानमन्त्रीको यो कार्यले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लागेका धेरैलाई हौसला मिलेको छ । सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरौं । विरोधका लागि विरोध नगरौं ।
– प्रा. मनिष पोखरेल, कम्प्युटर विभाग, काठमाडौं विश्वविद्यालय
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ १०:५९
उपचार गर्न विदेश
शनिबार प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र मुलुकको दशा’ समय सान्दर्भिक लाग्यो  ।
ठूला नेता, ठूला शासक/प्रशासक सामान्य बिरामी पर्दा उपचारका लागि विदेशमा लर्को लाग्ने चलन गणतन्त्र आइसकेपछि धेरै बढेको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशका केही जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बिरामी भएपछि सिटामोल र प्राथमिक उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । यतिमात्र होइन, नेपालका विभिन्न ठाउँमा यस्तै बाध्यता छन् । तर ठूला नेता, शासक तथा प्रशासक बिरामी पर्दा सपरिवार विदेश गएर महँंगा अस्पतालमा उपचार गराउँदा कहाँबाट यति ठूलो रकम जोहो गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । आफ्नै देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हुँदाहुँदै सामान्य बिरामी पर्दा पनि विदेशका अस्पतालमा उपचार गराउने ठूलो रकम कहाँबाट आउँछ ? छानबिन हुन जरुरी छ । यदि नेपालका अस्पतालप्रति विश्वास छैन भने किन चर्का भाषण गरेर हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्‍यौं भन्ने ? ठूला–साना सबैले नेपालमै उपचार गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।